ဆေး | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
စိတ်ပူနေတာ..ဆီးချိုဆိုရင် အစားဆင်ခြင်ပေးပါဆရာမရေ...ဆရာမ သောက်ရတဲ့ မေတာ(မြစ်တာ မပေါင်းတတ်လို့..:P) ဆေးတွေနဲ့ အခုပြန်ကောင်းလာပြီမဟုတ်လားး..
ဆရာမ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ စာတွေအများကြီးဆက်ရေးနိုင်ပါစေ..
take care, ma cho thinn.
မချိုသင်းရေ- ကျမတော့..သိပ်စိတ်မပူသေးဘူး။ ရီစရာတွေ နောက်နေနိုင်သေးတယ်။း)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်- ကျန်းမာ ရွှင်လန်းစေ ဖို့..ဆန္ဒပြုပါတယ်နော်။ Take good care !
အမချိုသင်းနေမကောင်းတာကိုရေးတာကလည်း ဖတ်ရတာ ပျော်စရာကြီး...ဟီး..
အမရေ.. ကျန်းမာမှ ပျော်စရာပိုကောင်းတာနော်... နေကောင်းအောင်နေပါ...
အမတစ်ယောက် ကျန်းမာချမ်းသာပြီး စာတွေ အများကြီး ရေးနိုင်ပါစေ...
အမချိုသင်းရေ မေတ္တာဆေးလာတိုက်ပါတယ်။ အမဖေဖေက အမကို သိပ်ချစ်တာပဲနော်။ အမချိုသင်းရဲ့ အမတွေပေးတဲ့မေတ္တာဆေးရယ် ကိုကျော်ရဲ့မေတ္တာဆေးရယ်အပြင် နိနိတို့ မေတ္တာဆေးပါပေါင်းစပ်လိုက်ပြီး ရောဂါတွေ အဝေးကြီးကို လွင့်သွားပါစေ။ သင့်ဘ၀အတွက် လွယ်အိတ်လေးတလုံးနဲ့ စာပေအကျိုးသယ်ပိုးခဲ့တဲ့အမက အခုလည်း ဘလော့ဂ်တွေမှာ လွယ်အိတ်လေးနဲ့ လိုက်လံအားပေး မေတ္တာတွေပေးနေလို့ ချစ်ခင်နေမိတာဗျ။ အမရောက်မလာရင် မျှော်မိနေတော့ အမနေကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
မေတ္တာဆေးကို လင်းတို့ ပါကူတိုက်မယ်နော်။ ဒီတခါ နေမကောင်းလို့တောင်မကျော်နိုင်တော့ဘူးထင်ရင် လှမ်းသာအော်လိုက်။ မေတ္တာဆေးတိုက်မဲ့ မောင်နှမတွေ တပုံကြီးရှိတယ်။
ဆီးချိုရှိတာ အစားအသောက်ဆင်ခြင်ပါ။နာမည်သာချိုပါ အမရယ် ဆီးတော့မချိုလိုက်ပါနဲ့ ။ သေချာဂရုစိုက်ပါ။ မတည့်တာတွေ လုံးးးဝမစားဘဲနေဘို့ကြိုးစားပါနော်။
မမိုးချို..မတည့်တာတွေနဲ့ မစားနဲ့နော်..လိမ်မာတယ်။ အဲဒါမှ မြန်မြန်နေကောင်းမှာ..။ တချို့ကတော့ ကြက်ဟင်းခါးသီးဆေးလုံးတို့၊ ဆင်တုံးမနွယ်တို့ ဗမာဆေးတွေပါ တွဲသောက်တာ မြင်ဖူးတယ်။ လာဖတ်နေကျပေမယ့် မမိုးချိုက စာရေးဆရာမဆိုတော့ comment ရေးရမှာ လက်မရဲလို့။ ခု နေမကောင်းဘူးဆိုလို့ အားပေးတာ :-)
အမြန်ဆုံး ဒေါင်ဒေါင်မြည် ဖြစ်စေဖို့ဆုတောင်းပေး ပါတယ်။ ဂရုစိုက်ပါနော်။
အမရေ .. ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲမှာ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်နော် ..
အမက စာရေးဆရာမ လို့ မပြောရဘူး နေမကောင်းတာတောင် ဖတ်လို့ကောင်းအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်။ အမနေမကောင်းတာ သနားရင်း ရယ်တောင် ရယ်မိသေးတယ်။ ကျွန်မ ကြီးတော်ကြီးလည်း အမလိုမျိုးပဲ ... ။ အခု တကယ်ဖြစ်နေတာလို့ ခဏခဏ ဖြည့်ပြောနေကျ။ :P
မြန်မြန်နေကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် အမရေ ...
အမရေ.. မြန်မြန်နေကောင်းပါစေ.. မေတ္တာဆေးလည်း ကူရတာပေါ့..ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါနော်.. :)
MCT နေမကောင်းဘူး ဆိုတော့ တို့လေ ပြာ ကနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ မိုက် ကနဲ ဖြစ်သွားလို့ ဘေးက ကုလားထိုင် ကို ဖမ်းပြီး ဆွဲ လိုက်ရသေးတယ်။ စိတ်တွေပူလိုက်တာ။ ရင်တွေလဲ ပူတယ်။သူမျှားဘယ်လို နေသေးလဲ။ ဆီးတွေ များ အရမ်းချိူနေမလာ။ ဘာတွေ များစားနေ မှာပါလိမ့် . နရဂိုထဲ ကလည်း မချက်တတ်။ မပြူတ်တတ်။ (အဲလေ. ပြူတ်တေြာ့ပူတ်တတ်ပါတယ်။ ဘဲဥ) ဆိုတော့ စိတ်တွေ ပူတာပေါ့။
သူတို့ အမေရိကား မှာ ကိုယ်တို့လို စားစရာမှ ပေါ့ပါ့ မလား။ စားချင်တာတွေ မစားရတော့ အရမ်း စိတ် ဆင်းရဲနေရှာမှာဘဲ။ ကိုဝဏ ကရော ဂရုမှ စိုက်ပါ့မလား။ အိပ်လို့ကောပျော်ပါ့မလား။ ဟိုိတွေး ဒီတွေးနဲ။ အိပ်ရေမဝရင် မူးနေပြီး သကာ လ တယောက်ထဲ အိမ် မှာ လဲ နေလို့ မှ ဘယ် သူ သိပါ့မလဲ။ ခက်လိုက် တာနော။ လိုက်သွား ကြည့်ရင် ကောင်းမလား မသိဘူ။ ကတုန် ကယင်တောင် ဖြစ်လာပြီ။ ရှူဆေးလေး ပေးပါဦးမောင်ရယ်။ ဘယ်လို သဘောရသလဲ. ခင်လိုက်သွားတော့မယ်..................................etc…..
တယ်လဲ သဲတဲ့ ညီအမတွေ, ဒီစကား, ဒီလှေ , ဒီရေနဲ့ မိုးသည်းသည်းသာရွာလို့ ကတော့ ..... တပြည်ခြားဆိုတော့ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ၊ စာတွေ ဖတ်ချင်ပါသေးရဲ့။
အမရေ စိတ်ပူလိုက်တာ။ ကျနော့အမေလည်း ဆီးချိုရောသွေးတိုးရောပါ နှလုံးရောဂါကတော့ မွေးရာပါလေ။ အမေလည်း အစားသိပ်မက်တာ။ ဂရုစိုက်ပါအမရယ်။ ဘေးကအားလုံးပူပန်နေကြတာပါ။ ဂရုမစိုက်ခံရဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ဗျာ....
မိသားစုရဲ့ မေတ္တာဆေးအပြင် ၊ မိုးချို ဘလော့ဂ် ပရိသတ်တွေ ထပ်ဆောင်း ပေးတဲ့ မေတ္တာဆေးကြောင့် တကယ့် ကို ကျမ်းမာ အသက်ရှည် နေဦး မှာ ..
နေမကောင်းတာကို သနားမလို့လာတာ ခုတော့ ရယ်ရတာနဲ့ပဲ မောပြီး နေမကောင်းသလိုပြန်ဖြစ်လာလို့ ပြန်သွားပြီ။ နောက်မှ သတင်းမေးတော့မယ် :D
ပျော်စရာလေးတွေ အမြဲပြောတတ်တဲ့ အစ်မ နေကောင်းပါစေ။
တောင်ပေါင်းများစွာကို အစ်မကျော်အုန်းမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်း)
အင်း...ဆရာတင်မိုးတို့များ သမီးနေမကောင်းတာတောင် ကဗျာလေးတော့ ဖြစ်လိုက်သေးတယ်နော်။
အစားဆင်ခြင်ပါတော့ မပြောတော့ပါဘူးဗျာ။ ကိုယ်ချင်းစာလို့ပါ။ ကျနော်လည်း သွေးတိုးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် လူ့ဘ၀က တိုတိုလေး...ဆိုတော့....
အစ်မရေ ချစ်ခင်သူတွေ ပို့သတဲ့ မေတ္တာကြောင့်
ဆုတောင်းပို့ စ်ပြီးကတည်းက ပို့ စ် အသစ်မတင်တော့
စိတ်ထဲမှာ နေမကောင်းဖြစ်လို့ များလားထင်နေမိတာ...။
မြေပြန့် ပြန့် မှာ ဖြစ်ပါ....
အဲဒီ တောင်နားကို မသွားပါနဲ့ ...။
အမရေ ပြာလောင်ကာတွန်းတပုဒ်သတိရတယ် “ဒီတောင်က မကျော်နိုင်တော့ဘူး တောင်ဟိုဘက်မှာ အရက်ဆိုင်မရှိလို့” ဆိုတာလေ။ စတာပါအမရာ။ ကိုကျော်ဝဏ္ဏကိုပြောပေါ့ “တောင်ကို တကယ် မကျော်နိုင်တာပါ။ ဘုရားစူး မကျော်နိုင်တာ။ မိုးကြိုးပစ် မကျော်နိုင်တာပါလို့” အဲလိုပြောလို့မှ ဂရုမစိုက်ရင် ချင်းမိုင်သာလာခဲ့ ... တူး ... ပြုစုမယ် :D ... ပျော်စေပျက်စေပါ အမရေ ... ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ စာတွေ အများကြီးရေးနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးနေမယ် နော်။
ချစ်တဲ့ ညီမ တူးတူး
မမိုးချို ရေးထားတာဖတ်ပြီး ရီရလို့ နေမကောင်းတာ သတင်းမေးဖို့မေ့သွားတယ်...
လာမဲ့တန်ဆောင်းမုန်းလပြည့်ကြရင် မယ်ဇလီဖူး သုတ်စားမယ်။ အဲ့ဒါ ဆေးပေါင်းခတယ်တဲ့။ မေတ္တာတွေအပြည့်နဲ့ သုတ်ကျွေးမယ်။ နေကောင်းပါစေလို့ ။
နေမကောင်းဘူး.... သွေးတိုးနေတယ်.... ဆီးချိုတက်နေတယ်ဆိုတော့ ဘုရား... ဘုရား..... ကျွန်တော် ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ဒန်ပေါက်စားလို့တော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်.... ဟီ..ဟိ sorry ဗျာ မသိလို့ဗျ...... ကိုဝဏ္ဏကိုပဲ ကျွေးလိုက်တော့နော်
ဒီတောင်အောက်မှာပဲ ပျော်အောင်နေပါ..အမး)
အစားလဲစား ဆေးလဲသောက်ပါ အမ။
အစားကို ဆေးနဲ့ ပြန်ထိန်းလို့ရပါတယ်အမရေ..
မြတ်နိုးအဒေါ်ကို မြတ်နိုးတို့ဆေးနဲ့ထိန်းလာတာ အခုဆို ၇၆ ရှိပီ။ ဘာမှစိတ်မပျက်ပါနဲ့။
Hayy... Sis cho thinn yay...
I also worried about u. Now after i read ur post then i m very laugh. U r so cute writer like Sayar. Anyway Don'tbworry too much! we who are ur readers send ( Myit Tar Say ) for u. Have great days without bad feeling!
By the way, i would like to consult u to take ( Man Ka Lar Ywat ). Now i have so many which are sent by my mother in law from myanmar. My husband takes them everyday morning and evening about 1 cup. And he don't eat any meat too much and he does exercise everyday and he has to walk about 1 hr after dinner for everyday.
So pls follow like this as test. His doctor said that if u take too much food, u must walk also more and more to lost them.
Man Ka Lar Ywat ko dry lote pee.... Tea leaf lo lote taut ter..
Cho Thinn.... Nayamyan kg per say....
Comments twe read pe.... yee twer tel .....
Sorry naw ...comment long twer lo.:P
ညီမရေ ကျန်းမာပါစေလို့ ပထမဆုံး ဆုအရင်တောင်းလိုက်ပါတယ်။
အမတွေ ရှိနေတာ ဘယ်လောက် အားရှိဖို့ ကောင်းလဲ...
အနားမှာလည်း better half နဲ့...
ဘာ အားငယ်စရာ ရှိမလဲကွဲ့...
ပြီးတော့လည်း သယ်ရင်းတွေ တပုံတပင်...
အားလုံးပို့သတဲ့ မေတ္တာနဲ့တင် ရောဂါ တ၀က် ပျောက်နေလောက်ပါပြီ.. ဟုတ်တယ် မလား..
ပဲများ မနေနဲ့တော့...း)
သမီး ထင်နေတာကလေ မမတို့ နှစ်ယောက်တော့ မွေးနေ့အပြီး အပျော်ခရီး ထွက်နေတယ်ထင်တာ။ ဘလောဘ့်မှာ ၃ရက်နားမယ်ဆိုတော့ ဒါကွက်တိပေါ့ဆိုပြီး ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် ဟုတ်နေတာလေ။ မမရယ် ဘာတွေ သွားစားတာတုံး။ စတော်ဘယ်ရီနဲ့ နို့ ဆီလား။ အစ်ကိုကလည်းလေ မမကို ကြောက်ရတာတော့ ကြောက်ရတာပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ဆေးတို့ အစာရှောင်ဖို့ ပြောတဲ့နေရာမှာတော့ မကြောက်နဲ့လေ။ ခက်ထာပဲ။ :D
မဖြစ်ပါဘူး သမီးလာနေမှကို ရတော့မှာ။ (ခွင်တည့်တုန်း ထည့်ထားတာလေ) စောင့်ရှောက်ဖို့လာမှာပါ။ ;))
မမရယ် ရှိကြီးခိုးပါရဲ့ အချိုဆိုရင် လုံးဝမစားပါနဲ့တော့နော်။
နေမကောင်းဘူးပြောလို့ စိတ်မကောင်းဘူး။ ကျွန်တော့်အမေမှာလည်း ဆီးချိုရှိတယ်။ အစားအသောက်နဲ့ ဆေးနဲ့ထိမ်းထားတာ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ အစ်မရေ ပျော်အောင်နေပါဗျ။
သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ မေတ်တာဆေးကြောင့် အမြန်နေကောင်းပါစေဗျာ။
အမြန်ဆုံးနေကောင်းပြီး စာတွေမြန်မြန်ရေးနိုင်ပါစေ . . .
ဖတ်နေကျပေမယ့် comment တခါမှမရေးဖြစ်ပါ၊
ညီမလိုပဲ ဖတ်နေကျတဲ့ သူတွေအများကြီး အမရဲ့ စာတွေကို မျှော်နေပါတယ်၊
ပို့ သကျတဲ့ မေတ္တာတွေ အမဆီ စူးရောက်ပါစေ . . .
စာပြန်ရေးမယ် ဆိုလို့ဝမ်းသာနေတာ။
မေတ္တာဆေး အစွမ်းထက်တယ်နော်း)
Wow.. So many posts..
တောင် ဆိုလို့ ကျောက်ဆည် မှာတုန်းက မဆွှဲပဲ မချော့ပဲ ထားလိုက်ခဲ့၇င်ကောင်းသား.....
အစ်မက နေမကောင်းတာတောင် ရယ်စရာဘက်က လှည့်ပြီး တွေးတတ်တာပဲ။ စိတ်ပြေစရာပေါ့။ နေကောင်းအောင် နေပါ။ ဒါမှ စာတွေ များများရေးနိုင်မှာပေါ့။ :)
သြော် သံယောဇဉ် သံယောဇဉ် တခါမှ မမြင်ဘူး မကြားဘူးတဲ့သူကိုခင်မိသတဲ့။ ညောင်လေးတွေ နေကောင်းရဲ့လား။
နေမကောင်းတာတို့ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့တာတို့က ကျနော့်မှာ အတွေ့မကြုံ့ သိပ်မရှိပါဘူး။ ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုတော့ သနားတယ်။ ပိန်ပိန်နဲ့ ချူချူ ချာချာလေးတွေတွေ့ရင် စိတ်မကောင်း ပါဘူးအမရာ
ဆီးချို ရှိတယ်ဆိုလို့ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် အစ်မ ..ဂရုစိုက်ပါနော်.Comment ရေးချင်တယ်... ဒါပေမယ့် ..ခုပေါ်လာမယ့် siskhaung@gmail.com ဆိုတာ ညီမ မဟုတ်ဘူး..ရေးတိုင်း သူ့နာမည်ကြီးနဲ့ပဲ ပေါ်နေတာပဲ... ခုဆို ရုံးရောက်တာနဲ့ မမိုးချိုသင်း ရဲ့ ဘလော့ကို ကိုယ့် မေလ်း ထက်အရင် ဖွင့်ဖြစ်နေပြီ..အရမ်း ကြိုက်တယ် .. သိတာမကြာသေးဘူး..သိတဲ့ နေ့ ကရုံးပိတ်ရက်လေ.. အားလုံးကို တစ်နေ့ထဲနဲ့ အကုန်ဖတ်ပစ်လိုက်တယ်.. :D comment ကိုကိုယ့်နာမည်နဲ့ ကိုယ်ရေးတယ် ..ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အစ်မ ရယ်..